The University of Sydney - Study in jaamacadda top of Australia
gaabinta : uOS
aasaasay : 1850
Ardayda (qiyaastii.) : 53000
Ha iloobin in aad wada hadlaan The University of Sydney
Qorto The University of Sydney
The University of Sydney ayaa kaalinta 45 adduunka ee 2015-16 Qiimeynta University qiimaha QS World.
Waa markhaati spectrum ballaadhan ee xoogga bandhigay dhamaan 16 Caqlina, kuwaas oo qaar badan ay leeyihiin isu qiimeynta cajiib ah.
Horseedka natiijada University ayaa Arts iyo Humanities, kaas oo gaari darajo ka mid ah 14-siman caalamka iyo labaad ee Australia.
Labada Life Sciences iyo Medicine iyo cilmiga bulshada iyo Maamulka ayaa kaalinta 20-aad ee adduunka, la Sciences Life iyo Medicine sidoo kale dayactirka ay taagan sidii labaad ee Australia sanadka soo socda saddexaad.
xoog The multi-anshax cilmi University ayaa la xaqiijiyay in natiijada Rankings, la Engineering iyo Technology, Sciences Dabiiciga iyo Sayniska Bulshada iyo Maamulka oo dhan kaalinta in shanta ugu nidaamo ay Australia, kasta uu helo derajada saddexaad ka mid ah gudaha. Engineering iyo Technology sidoo kale u kacay 14 meelaha in qiimeynta ka soo 44aad wadajir ah 30-wadajir ah mid caalami ah.
QS World University qiimeynta by Subject 2016
The University of Sydney ayaa ka mid ah hay'adaha weyn dunida ee kaalinta, la 41 oo ka mid ah 42 maadooyinka qiimeeyey gaaro rating ah in hogaanka 100 adduunka ee University Rankings Adduunka by Subject.
laba iyo soddon maadooyin ah ayaa kaalinta in hogaanka 50 caalamka, kuwaas oo sagaal ayaa kaalinta in hogaanka 20.
Science xoolaha waxaa kaalinta sagaalaad ee dunida iyo tiro ka mid ah ee Australia, halka saddex maadooyin kale sidoo kale la wadaago tiro ka mid ah darajayn qaranka - Architecture / Dhisay Deegaanka (17 caalamka), Medicine (17), iyo Nursing (13).
The qiimeynta qiimaha la yihiin sidii la barbardhigo caalamka ugu dhamaystiran ee jaamacadaha heer maado.
Natiijooyinku waxay iftiimiyeen awooda University ee maadooyinka guud nidaamo oo dhan kaalinta, oo ay ku jiraan Law (11), Waxbarasho (16), Accounting iyo Maaliyadda (18), Juqraafiga (22), English Language iyo Suugaanta (20) iyo Engineering – Civil iyo Dhismayaasha (20). Waayo, markii ugu horeysay, Falsafadda galay hogaanka 50 caalami ah oo la darajo ah 37 dunida oo dhan.
QS Graduate qiimeynta University Adduunka 2016
The University of Sydney kaalinta liiska jaamacadaha Australia ee Graduate Shaqaalaysiin qiimeynta xaflad QS 2016, iyo waxaa sidoo kale lagu qiimeeyo in hogaanka 15 caalami ah oo la darajo ah 14.
Qiimeyntaan more baa'bin badan 30,000 dadka si loo ogaado asalka waxbarasho ee dadka ugu caansan dunida shaqada.
Tacliinta Sare Times qiimeynta University Adduunka 2015
The 2015 Times Tacliinta Sare (THE) Qiimeynta University Adduunka, taas oo mudnaanta xigashooyinka cilmi, dakhliga cilmi, sumcad iyo degaanka barashada, na kaalinta at 56 ka mid ah in ka badan 1100 jaamacadaha adduunka oo dhan.
Qiimeynta University World THE yihiin miisaska kaliya waxqabadka jaamacadda caalamiga ah inuu xukumo jaamacadaha ee dhammaan ergooyinka muhiimka ah, oo ay ku jiraan xigashooyinka, cilmi, baridda, aragti caalami ah iyo dakhliga warshadaha. Sababaha qiyaas qiimeynta sanadlaha ah oo ay ku jiraan sumcad tacliimeed, statistics yeerida, isku darka caalamiga ah, iyo dakhliga cilmi-baarista iyo darajo abaal per shaqaalaha.
The University of Sydney u kaca ee ee 2015-16 qiimeynta u kaxayn jiray kordhay oo dhan tilmaamayaasha, la kacda ugu weyn ee sumcad tacliimeed, oo booday 24 boqolkiiba, iyo xigashooyinka oo arkay a 12 boqolkiiba kororka. Cilmi-baarista iyo warshadaha dakhliga sidoo kale labada dheeraad ah markey Mixraabka ugu badan 10 boqolkiiba.
Qiimeynta University The Times Higher Education waxaa la daabacay by bixiyaha UK ayaa keentay caalamiga ah ee qiimeynta iyo tirakoobka ee waxbarashada sare ee dunida ee.
Times Tacliinta Sare 2015 Global Shaqaalaysiin University qiimeynta
The University of Sydney ayaa kaalinta 42 ee dunida iyo tiro ka mid ah New South Wales ee 2015 Tacliinta Sare Times Global Shaqaalaysiin University qiimeynta.
darajayn waxaa abuuray codadka isku darka of 2,200 qora iyo 2,400 Agaasimayaasha maamulka ee shirkadaha caalamiga ah ee guud 21 dalalka.
Qiimeynta SAMIDA Times Tacliinta Sare Adduunka
Waxaan ka mid ah hogaanka ayaa kaalinta 100 ugu jaamacadaha haybadda leh ee dunida ee 2016 Qiimeynta SAMIDA Times Tacliinta Sare Adduunka.
Iyadoo darajayn caalami ah 61-70, waxaan la hadhay our booska sida saddexaad ee Australia, iyo mid ka mid ah jaamacadaha kaliya seddex qaran in lagu daro liiska. Jaamacadda Harvard kaalinta qiimeynta bilaha ah, kuwaas oo ku badan hay'adaha ku salaysan Maraykanka.
The qiimeynta sannadlaha ah ayaa la abuuray by weeye views ka badan 10,300 jawaabeyaasha, in 133 dalalka, ku saabsan hay'adaha yihiin kuwa ugu fiican ay beerta cilmi iyo cilmiga.
US News & Best qiimeynta Global Jaamacadaha Report Adduunka
The University of Sydney ayaa kaalinta 51 ee 2015-16 US News & Best qiimeynta Global Jaamacadaha Report Adduunka.
Waxa kale oo naloo kaalinta koowaad ee Australia ee Medicine Clinical iyo Physics, iyo Arts iyo Humanities ayaa kaalinta in hogaanka 20 caalamka.
US News isticmaalaa database Thomson Reuters-in lagu kala saaro xagga sare ee 750 hay'adaha caalamka. Waxaa ka mid ah 12 Tilmaamayaasha laga bilaabo cilmi sumcad iyo PhD statistics in waraaqaha tirakoobka heer sare daliishaday iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxa kale oo ka mid ah tirakoobka kale bibliometric on publications, xigashooyinka, buugaagta iyo shirarka.
Ma aha oo kaliya dhalaalaya ... laakiin qurux badan
Annagu ma ahan oo keliya sare falan for najaxa akadeemiyadeed; our ugu weyn campus Camperdown / Darlington waxaa si joogto ah loo aqoonsan yahay mid ka mid ah ugu quruxda badan adduunka.
Daily Telegraph ayaa UK ayaa noo kaalinta lambarka 10 in ay List Jaamacadaha Beautiful, oo aynu ku jirno tiro sagaal top Huffington Post ayaa ka ee 15 qulqusho.
Dhanka kale, Sydney laftiisa uu helo booska a. In ka Cities Student QS Best, taas oo ku salaysan awoodda, tayada nool, hawlaha loo shaqeeyaha iyo kala duwanaanshaha ardayda, waxa uu kaalinta ugu horeysay ee Australia iyo afaraad ee dunida oo dhan.
Oo 2014, Shirkadda talinta caalamiga ah AT Kearney ee Cities Global Index saaray Sydney ka hor 83 magaalooyinka sida magaalo ee caalamka ugu caansan inaad wax ka barato ee ardayda caalamiga ah.
Sannad kasta magaalada soo dhaweeyay 50,000 ardayda booqanaya, ku dhawaad 35,000 waxbarashada on xarumood ee City ee aagga Sydney.
Beeraha iyo Deegaanka
Xarunta Carbon Biyaha iyo cuntada
Machadka Taranka Plant
Sax Beeraha Laboratory
Biyaha raaca iyo Geo-Information Sciences Laboratory
Architecture, Design iyo Qorshaynta
School of Suugaanta, Art, iyo Media
School of Languages ​​iyo Dhaqammada
School of falsafada iyo Historical soo baara
School of Sciences Bulshada iyo Siyaasadda
Ganacsiga (The University of Sydney Business School)
Anshaxa of Accounting
Anshaxa of Business Analytics
Anshaxa Systems Information Business
Anshaxa of Law Business
Anshaxa of Business International
Anshaxa of Marketing
Anshaxa Shaqada iyo abaabuleed Studies
Institute of Gaadiidka iyo Logistics Studies (ITLS)
Waxbarashada iyo Shaqada Bulshada
Engineering iyo Information Technologies
School of Aerospace, Engineering farsamo iyo bar baarey
School of Chemical Engineering iyo Biomolecular
School of korontada iyo Macluumaadka Engineering
Anshaxa Dabeecadda iyo Social Sciences Caafimaadka
Anshaxa Jimicsiga iyo Sayniska Sport
Anshaxa of Medical Science Shucaaca
Anshaxa Occupational Therapy
Anshaxa talinta Rehabilitation
Anshaxa Pathology Hadalka
Law (The University of School Law Sydney)
Medicine (The University of School Medical Sydney)
Dugsiga Central Clinical
Isbitaalka Carruurta ee Dugsiga Clinical Westmead
School Clinical Concord
School Clinical Nepean
School of Health Miyiga
Hospital Sydney Adventist School Clinical
School Clinical Westmead
Anshaxa ee qabatinka Medicine
Anshaxa ee Suuxinta
Anshaxa of habdhiska iyo Histology
Anshaxa of Science Biomedical
Anshaxa of Brain iyo Mind Sciences (Maskaxda iyo Mind Center)
Anshaxa indhaha Clinical iyo Caafimaadka Eye
Anshaxa Dhegaha, Sanka iyo Cunaha
Anshaxa of Medicine Degdegga ah
Anshaxa of Practice Guud
Anshaxa of Medicine hidda
Anshaxa ee sawirka Medical
Anshaxa of Medicine Intensive Care
School of kelli Bioscience
Anshaxa of Medicine
Anshaxa ee dhalmada, Dumarka iyo sabiga
Anshaxa ee dhaqaatiirta caruurta iyo Child Health
Anshaxa ee Physiology
Anshaxa ee maskaxda
Anshaxa Hurdada Medicine
Anshaxa ee Qalliinka
Nursing iyo ummulisooyinka (Sydney School Nursing)
Taariikhda iyo Philosophy of Science
Sydney College of Arts ah
In 2001, Jaamacadda Sydney madax sare, Dame Leonie Kramer, ayaa lagu qasbay inuu is casilo by FIFA ee jaamacadda. In 2003, Nick Greiner, a Premier hore ee New South Wales, iska casilay booskiisa sida Guddoomiyaha jaamacadda ee Graduate School of Management sababtoo ah dibad tacliinta ka dhanka ah oo uu guddoominayay isku mar of British American Tobacco (Australia). Ka dibna waxa, xaaskiisa, Kathryn Greiner, iska casilay ka cabanaya ka mid ah labada jagooyinka ayay qabtay jaamacadda guddoomiyaha of Peace Sydney Foundation oo ah xubin ka tirsan golaha fulinta ee Machadka Cilmi-baarista ee Asia iyo Pacific. In 2005, Adeegga Ururka Public ah ee New South Wales iyo Bulshada iyo Midowga Sector Dadweynaha ku jiray muran la jaamacadda badan soo jeedin ah in loo leeyahay ammaanka xerada ugu weyn ee (iyo campus Cumberland ah).
Bishii February 2007, Jaamacad lagu heshiiyey si ay u bartaan qayb ka mid ah dalka siiyey St John ayaa College si ay u horumariyaan Institute Sydney ee Caafimaadka iyo Cilmi-baarista Caafimaadka. Sida a hay'ad Roman Catholic, in wareejinta dhulka St John ayaa xadeynta saaray nooca cilmi-caafimaad oo laga fuliyo goobta, doonaya in nafo la nuxurka ergada college ee. Tani waxay sababtay walaac ka mid ah kooxaha qaar ka mid ah, kuwaas oo ku dooday in la cilmi-caafimaad sayniska geleyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaa taas diiday maamulka jaamacadda ee maxaa yeelay dhismaha lama loogu talagalay ujeeddo iyo waxaa jiray xarumo kale oo badan oo u dhaw meesha cilmi sida qaadan kartaa meel.
Bilowga 2010, Jaamacada muran qaatay logo cusub. Waxaa xajisto hubka jaamacadda isla, si kastaba ha ahaatee waxa ay qaadataa on eegtid oo dheeraad ah oo casri ah. Waxaa jira isbedelo stylistic, mid ka mid ah ugu weyn isagoo shuluggii mantling gacanta ee, qaabka caddina(gaashaan), ka saarida ee qorniin duudduuban oo ku dhiga ah, iyo sidoo kale qaar kale oo khiyaano hubka laftiisa gudahood, sida baar iyo dhogorta libaaxa, tirada khadadka kitaabkii furan iyo colouration ah. Coat asalka ah ee Arms ka 1857 sii in loo isticmaalo ujeeddooyin rasmi ah oo kale oo rasmi ah, sida on testamurs.
Action bilaabay Spence si loo hagaajiyo joogtaynta dhaqaalaha ee jaamacadda ayaa ka go'day qaar ka mid ah ardayda iyo shaqaalaha. In 2012, Spence uu hoggaaminayo dadaallada lagu jaray kharashka jaamacadda ee si wax looga qabto saameynta dhaqaale ahayd ariinta ah in diiwaan caalamiga ah ardayga ee guud ahaan Australia. Tani waxaa ka mid xad dhaafka ah ee tiro ka mid ah shaqaalaha jaamacadda iyo macalimiinta, in kastoo qaar ka mid ah jaamacadaha ku dooday in hay'ad waa in dib u gooyaa on barnaamijyada dhismaha halkii. Dhaleeceyn ku doodi riix ee kaydka waxaa dhaqaajiyey karti macalin iyo warheynta, hurinayaan tallaabo warshadaha lagu jiro wareeg ah gorgortanka ee 2013 in sidoo kale ka muuqataa walaac baahsan oo ku saabsan maalgelinta dawladda ee waxbarashada sare.
sahan An shaqaalaha gudaha ee 2012/13, taasoo laga helay qanac baahsan sida jaamacadda loo maamulo. Mar la weydiiyay in heerka ay heshiiska la taxane ah oo bayaan oo ku saabsan jaamacadda, 19 boqolkiiba kuwii la waraystay rumeysan “isbeddelka iyo hal-abuurka” si fiican u qabta jaamacadda. In sahanka, 75 boqolkiiba shaqaalaha jaamacadda tilmaamay madaxda sare aan la dhagaysto iyaga, halka kaliya 22 boqolkiiba ayaa sheegay in isbedel uu si wanaagsan u maareeyay iyo 33 boqolkiiba ayaa sheegay in madaxda sare ahaayeen daydo wanaagsan.
Toddobaadka ugu horreeya ee simistarka, shaqaalaha qaar ka mid ah soo maray mooshin kalsoonida ee Spence sababta oo ah walaac uu riixaya shaqaalaha si loo hagaajiyo miisaaniyadda, halka uu ka helay gunno waxqabadka of a $155,000 in wadar ahaan mushaharka qaaday in ay $1 million, dushiisana 0.1 boqolkiiba dadka dakhliga ee Australia. warbaahinta Fairfax ayaa sheegay Spence iyo madaxda kale Uni leeyihiin baakadaha mushaar qiimo weyn tahay toban jeer ka badan mushaharka shaqaalaha iyo double in Ra'iisul Wasaaraha.
Su'aalaha ku saabsan maalgelinta dawladda ee waxbarashada sare ayaa mar kale ka muuqataa 2014 soo socda dawladda federaalka ah ee deregulate fiiga ardayga. Jaamacadda qabtay geedi socod wada tashi kala duwan, taas oo ka mid ah “Kulanka town hall” jaamacadda ee Great Hall 25 August 2014, halkaas oo daawadayaasha ah ee ardayda, shaqaalaha iyo Qalinjabiyeyaasha walaac ka muujiyay ku saabsan qorshaha dawladda ee baaqay hoggaanka jaamacadda si ay u qalqaaliyaan ka dhanka ah soo jeedinta.] Spence qaaday meel ka mid ah taasoo keentay Australian-chancellors ku xigeenka in si joogta ah ugu yeeray oo dhan 2014 wixii isbeddel in maalgelin aan wiiqi siman jaamacad helaan halka dooday waayo, seyladda lacag si kor loogu qaado kharashka koorsada in inta badan ee ardayda waxbarashada sare.
Inta lagu jiro muddada Spence ee, Jaamacadda ayaa soo jiitay quudhsado ee ardayda u ogolaanaya dugsiga weyn ee gaarka loo leeyahay, Scotland College, in ay galaan jaamacadaha via a “dariiqa of mudnaan” taasi oo ka diiwaan Diploma ah oo Diyaarinta Tertiary halkii shuruudaha gelitaanka HSC. ardayda jaamacada lagu eedeeyay The $12,000 in ay qaataan koorsada iyo tan qirtay tiro ka mid ah ardayda inay koorsooyinka degree. Kashifay by warbaahinta Fairfax, nidaamka ayaa haatan lagu eedeynayaa by Phillip Heath, Gudoomiyaha qaranka ee ururka madaxda dugsiyada madaxbannaan ee Australia.
baaritaan An by Fairfax Media ee 2015 shaaca ka qaaday qish baahsan ee jaamacadaha ku yaalla NSW, oo ay ku jiraan University of Sydney. Jaamacadda aasaasay guddi ah oo ku saabsan anshax-tacliimeed ee April 2015 si ay u ilaaliyaan jagada hoggaanka ay ka hortagga dhacdooyinka qish iyo anshax-tacliimeed.
baaritaan dhawaan Broadcasting Corporation ee Australia (ABC) bandhigi heshiisyo shirkadaha dhexeeya Kuliyada caafimaadka xoolaha iyo shirkadaha cuntada xayawaanka waaweyn waxay sababtay in heyn ee wax soo saarka cuntada cat waxyeello baaro si loo ilaaliyo sharkadaha.
Ma rabtaa wada hadlaan The University of Sydney ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
The University of Sydney dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of The University of Sydney.